Pillow Case & Pillow Factory - China Pillow Case & Pillow Manufacturer, mpamatsy
Pillow toradroa toradroa
Hemp Cloth dia lamba mifangaro amin'ny fibre Hemp sy fibre hafa. Hemp Ranks voalohany amin'ireo fibre voajanahary. Izy io dia manana ny fiasan'ny henjana, ny fanoherana ny abrasion, ny fanoherana ny hafanana ambony, ny fanoherana ny asidra sy ny alkali ary ny fanesorana ny hamandoana tsara.
Pillowcase fiaramanidina vita pirinty manga
Ny lamba ondana dia vita amin'ny lamba mandoka mandoka sy mifoka rivotra, izay marefo sy malefaka, akaiky ny vatana ary mahazo aina, ary manana androm-piainana lava kokoa.
Ondana fanjairana kofehy fiaramanidina
Ny lamba vita amin'ny landihazo 100% dia mahatsiaro ho mamy, azo alaina ary hozatra Wicks. Ny habe, ny fitaovana ary ny loko isan-karazany dia azo amboarina amin'ny mpanjifa, ary afaka mamolavola endrika ihany koa isika ary manaova fomba arakaraka ny santionany.
Ny eo alohan'ilay ondana dia nopetahany Jacquard telo heny, mamirapiratra, malefaka ary mahazo aina, miaraka amina zaitra tsara, lamaody ary tsotra, manatsara ny fahatsapana ny maha-ambony, tsara tarehy ary maharitra.
Akanjo fohy fanatanjahan-tena haingam-pandeha, Akanjo fohy vita amin'ny ravina haingam-pandeha ho an'ny lehilahy, Lamba firakotra roa sosona, Palitao fanatanjahan-tena, Fanodinana santionany sy famokarana, Pataloha fanatanjahan-tena ho an'ny lehilahy,